» बाबु मोक्तानको ‘सोल्टिनी सारै मन पर्यो’ सार्वजनिक, भिमफेदी गाईजको दमदार प्रस्तुति
११ श्रावण २०७५, शुक्रबार ००:४९
मकवानपुर, ११ साउन । सेलो तथा आधुनिक नेपाली गीतका क्षेत्रमा चर्चा कमाउन सफल बाबु मोक्तान (बि.एल.) को नयाँ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मोक्तानको आवाज तथा भिमफेदी गाईजको फिचरिङ रहेको म्यूजिक भिडियो युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको एक साता नपुग्दै यसलाई एक लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
गायक मोक्तानसहित आशुसेन लामाको शब्द र संगीत रहेको गीतलाई बबीराज घतानीले एरेन्ज गरेका हुन् । सार्वजनिक गीतको म्यूजिक भिडियोलाई यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा १लाख ३ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ भने म्यूजिक भिडियोमा ४ हजारभन्दा बढी लाईक र ४ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
भिमफेदी गाईजका निर्मल लामा, मिथुन लामा, मनजीत लामा, अञ्जन लामा, सबिन लामा सहित रिना राई, मञ्जु लामा र पासाङ तामाङको अभिनय रहेको गीतको भ्यूडियोमा भिमफेदी गाईजकै कोरियोग्राफी रहेको छ । निर्मल लामा (बि.जी.) निर्देशन गरेको भिडियोमा विशाल सुस्लिङले छायाँकनको जिम्मा लिएका छन् ।
रोजगारीका सिलसिलमा कोरियामा रहनुभएका गायक मोक्तानले एक दशकभन्दा अगाडिदेखि संगीत यात्रा सुरु गरेका हुन् । उनले यस अघि नै ‘विधाता’ एल्बमबाट चर्चा कमाएका थिए । उक्त एल्बममा समावेश ‘जोमसोम बजारमा’, मिठो घात , परदेशी दाजु जस्ता गीत समावेश गरिएको थियो । सार्वजनिक भएको ‘सोल्टिनी सारै मन पर्यो’ बोलको गीत उनको ‘वेदनाको घाउ’ एल्बममा समावेश गरिएको छ ।
गायक मोक्तानले यस एल्बममा स्याउ खानु रसिलो मार्फाको , हृदयमा वेदनाको घाउ , धेरै नसा पिउने बानी जस्ता गीतहरु समावेश गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । सार्वजनिक गीतलाई राधा लामाले निर्माण गरेका हुन् । हेर्नुहोस् गीतको भिडियो–